Rutsigiro Rutsigiro - MediaLight Bias Lighting
Chigadzirwa chakangonaka chete sewarandi yacho. Isu tinomira kuseri kwezvose zvigadzirwa zvedu uye kana paine chingatadza kufamba, tichachigadzirisa - uye nekukurumidza. Ndicho chivimbiso chedu kwauri.
Ndokumbirawo ushandise fomu iri kuti utibate uye utsanangure mamiriro edambudziko. Tichadzoka kwauri nekukurumidza zvikuru panguva dzebhizimisi maawa 9 am-6pm MF uye mukati memaawa mashoma pakupera kwevhiki.
Kana yako unit isiri kushanda nemazvo ndapota tarisa zvinotevera:
1) Ndokumbira ubvise uye dzorerazve iyo yekudzivirira bhatiri bhatiri. Inogona kunge yakachinja panguva yekutakura.
2) Ndokumbirawo uedze imwe sosi sosi, senge komputa kana TV USB 3.0 chiteshi. (izvi zvinotibvumidza kutonga kunze AC adapter)
3) Ndokumbira ubvise dimmer module kubva ku USB tambo uye edza kushandisa iyo unit isina module. (izvi zvinobatsira kuona kana dambudziko riri kukonzerwa nedhimoni)
Zvawakawana kubva pabvunzo dziri pamusoro zvinoita kuti tikwanise kurova pasi kumhanya kubva kumhinduro yedu yekutanga.
Kupfuura zvese, zorora! Tichakusimudza timhanye.